Guddoomiye ku xigeenkii Bursaalax iyo qof shacab ah oo ku dhintay rasaas koox burcad ahi ay fureen & mas?uliyiinta gobolka oo halkaasi gaaray. – Radio Daljir
Guddoomiye ku xigeenkii Bursaalax iyo qof shacab ah oo ku dhintay rasaas koox burcad ahi ay fureen & mas?uliyiinta gobolka oo halkaasi gaaray.
Febraayo 24, 2010 12:00 b 0
Bursalax, Feb 24 ? Guddoomiye kuxigeenkii beesha Bursaalax C/Kheyr Mire Garniile iyo qof kale oo shacab ah aya ku dhintay rasaas koox burcad-badeed ahi ay xalay ku fureen dadweyne ku soo qamaamay xarunta shirkadda isgaarsiinta ee Goolis kaddib markii burcaddu ay xaruntaasi weerareen.
Burcadda ayaa in muddo ah isku gadaamay xarunta shirkadda, waxaana halkaasi ku soo yaacay dadweyne aad u tiro badan oo ay ku jireen mas?uuliyiinta Bursaalax, nabaddoono iyo waxgarad kaleeto oo u soo gurmaday sidii ay waanwan nabadeed u gali lahaayeen, waxaana rasaas dadkaasi burcaddu ay ku rideen ku dhintay labo qof oo mid yahay guddoomiye kuxigeenkii Bursaalax, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay halkaasi qof shacab ah.
Ujeeddada weerarkaan dhimashada iyo dhaawaca gaystay ee lagu qaaday Goolis Bursaalax, ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid beeleed oo ka danbaysay muran dhaxmaray guddoomiyaha maamulka Bursalaax iyo maamulka shirkadda Goolis taas oo sababtay burcad la hayb ah guddoomiyaha in ay weeraraan xarunta shirkadda.
Mas?uuliyiinta maamulka gobolka Mudug iyo kuwa degmada Galkacyo ayaa halkaasi gaaray maanta waxaana ay wali ku hawllan yihiin xal ka gaaridda weerarka dhimashada iyo dhaawaca gaystay ee xalay ka dhacay deegaanka beesha Bursaalax oo ka tirsan degmada Galkacyo.
Madaxda maamulka oo hadda ku sugan Bursaalax ayaa illaa iyo maanta ku hawllanaa sidii xal buux oo kama danbays ah ay uga gaari lahaayeen weerar koox dabey ahi ay xalay ku gaadeen xarunta shirkadda isgaarsiinta ee Goolis, weererkaasi oo ay dhinteen labo nin oo midkood uu ahaa guddoomiye kuxigeenkii beesha Bursaalax iyo nin kale oo shacab ah halka sidoo kalana uu dhaawac soo gaaray qof rayid ah.
Mas?uuliyiinta oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Axmed Cali Salaad, Duqa Galkacyo C.raxmaan Maxamuud Xaaji Xasan, taliyaha qaybta bileyska Col. Muuse Xasaasi iyo xubno kaleeto, ayaa kaa mid ah dadka ku hawllan qaboojinta xiisaddaasi, mana jiro illaa iyo haatan wax hadal ah oo ay saxaafadda siiyeen, walina laguma guulaysan in gacanta lagu dhigo raggii weererka gaystay.
Guddoomiye kuxigeenkii iyo qofkii kale ee shacabka ahaa ayaa galabta lagu aasay qabuuraha Bursaalax, waxaana saacadaha soo socda la filayaa in xal kama danbays ah laga gaaro arrinkaasi, waaan markii ugu horraysay oo fal noocaan oo kale ah uu ka dhaco deegaanka Beesha Bursaalax.
Madaxda idaacada Daljir oo dhalleeceeyey fal xad gudub ah oo lagula kacay weriye Axmed Somali.
Barnaamijka Dhaliil & Dhiirigelin: Dood ku saabsan waxqabadka maamulka gobolka Cayn & kan Buuhoodle.